5PM: Nhazi oru zuru ezu SaaS | Martech Zone
Otu n'ime ihe ịma aka site n'inwe ndị na-eto eto ma ọ bụ ndị na-emepe emepe bụ nanị ịnwa ịchụso na ibute ọrụ gị ụzọ. M na-arụ ọrụ na-erughị atọ outsourced ego, otu onye n'ime oké osimiri. Ọ dị ka mgbe ị kewasịrị ụbọchị ọrụ n'etiti oge oge, ị na - ewebata igbu oge n'ihe niile ị na - eme.
Enwetara m pịa mgbe m kagbuo Basecamp otu afọ gara aga. Ihe isi ike bụ na, mgbe m banyere ọrụ ọhụrụ m, alaghachiri m ọrụ na Basecamp ọzọ. Anaghị m ịkụ aka Basecamp, ọ bụ ngwa kwesịrị ekwesị. Achọrọ m naanị ihe nwere ọrụ siri ike karị na njikwa oge. Emere m mgbe ahụ, achọpụtara m na m ka na-eme ugbu a. Otu mkparịta ụka nwere ndepụta dị mfe iji depụta naanị anaghị egbutu ya dị ka ngwa njikwa njikwa.
Amaghị m ma Sergei Podbereschi na Greg Roy (ndị guzobere ya Nlekọta Ọrụ 5PM sọftụwia) ejiri Basecamp mee ihe ọ bụla, mana ha hụtara ụfọdụ nsogbu m hụrụ onwe m taa na ụlọ ọrụ ha, Ihe ngwanrọ QG.
Ya mere - ha tinyere isi ha ma mepee 5PM. Ejiri ngwa ahụ, nke megidere, mepụtara na kọntinenti abụọ dị iche iche gafere asụsụ 5 dị iche iche nke ndị ọrụ isii (ugbu a) na-asụ.
Mgbe m hụrụ nyocha nke 5PM, akpọtụrụ m Sergei. Nke a bụ otu 5PM si bịa:
Emeputara ya dika otutu oru nghazi oru ngo - site na nkpa. Ọ bụ azụ na 2003 mgbe anyị malitere na ọ bụ ihe ọ bụla si n'ebe ahụ na-amasị anyị. Ya mere anyi malitere n’onwe anyi ma kpo ya Project & Team Manager. N'ezie, ụdị mbụ ahụ bụ nke m mepụtara na mbụ, mgbe ahụ, anyị goro ndị ọzọ coders ịgbatị ya. 5pm malitere site na ngwaahịa mbụ ahụ. Ọ bụ ihe niile web20, ma, dị ka ị pụrụ ịhụ, ọ dabeere ọtụtụ echiche ochie. N'elekere 5 nke mgbede n'eziokwu bụ mbugharị. Ihe niile gbanwere - site na mmepe mmepe na interface na mbọn. Anyị malitere ya na November 2007, dị ka SaaS (Nke gara aga nke enwere ike ibudata).
Echere m na ọ na-ewe otu anya iji hụ otú ọ dị iche. Anyị egbughị akụkụ mgbe anyị na-ekewa interface. Anyị chọrọ ihe niile n'ime pịa ma ọ bụ abụọ na ohere ịhazi interface. Ọbụna ọ na - eji usoro iheomume Flash abịa (Amaghị m ihe ngwanrọ njikwa sọftụwia ọ bụla na - agwakọta AJAX na Flash n’otu).
Anyị nwere ụzọ dị iche iche na interface na atụmatụ - anyị na-anwa ime ka ọ dị mfe n'elu ma na-akwakọba ike dị ukwuu "n'okpuru mkpuchi". Ọzọkwa, 5pm bụ nsonaazụ nke ọhụụ na-atọ ụtọ - Greg bụ onye njikwa IT nwere ahụmịhe afọ 15, ebe m bụ nwata na-emepụta ihe na mmepe. Ndị njikwa dị ka echiche na akụkọ zuru ezu. Ndị mmepe kpọrọ ngwá ọrụ njikwa oru ngo, n'ụzọ bụ isi. Ya mere, anyị gbalịrị ịmepụta interface ebe ọ dị mfe maka ndị otu iji tinye ozi ma ọ bụ mechie ọrụ site na iji otu ịpị (ọbụlagodi site na email), ebe ndị njikwa nwere ikike igwu ala.
Echekwara m na anyị ga-amata ihe dị iche iche ka anyị na-agbakwunye atụmatụ, na-eji nzaghachi sitere n'aka ndị ahịa anyị. Na-atụ anya nnukwu mgbanwe na Usoro Oge na Akụkọ anyị na ọnwa ndị na-abịanụ.
Arịọla m ndị mmekọ mmepe anyị ka anyị lelee 5PM ozugbo. Ìgwè ahụ nọ na-ele anya Jira, ma interface na-eme ihe n'eziokwu na-agbagwoju anya na m. Enwere m olile anya na m ga-agbapụ na iji 5PM!
Maka gị Office Space buffs ebe ahụ, ị ​​ga-enwe ekele maka ngosi ahụ. Enough kwuru.
Tags: 5pmnjikwa ọrụsaasnjikwa oru omasoftware dị ka ihe ngwọta
Starbucks na-ebupụta Social Network
Na-amasị m nnọọ sleek na kensinammuo interface a otutu. Ana m anwale ya ugbu a (ikpe ikpe n'efu n'efu nke 14). Ka ahụ!
Naanị m na-agụ post gị ma ebe ọ bụ na ị na-achọ ezigbo ngwa ọrụ njikwa ọrụ ana m akwado gị ka ị lelee ProjectOffice.net. Ọ bụ azịza nke anyị dabeere na pm nke na-enyekwa ezigbo oge nhazi na njikwa ego, wikis na nsuso nsuso.
Ekwere m na ọ ga-amasị gị.
Ya mere, gbalịa ka m mara ahụmịhe gị.
Kedu, ndị 5PM si Indiana?!? 😉
Na-egwu egwu. Naanị m lere 5PM na, n'elu, ọ dị ezigbo mma!
Ha! Mba - mana ha nọ nso… na Ohio;).
Mgbe na-ele anya na ngwa m mara mma pumped na chọrọ ide banyere ya. Karịsịa ebe ọ bụ na ahụghị m ka edere ya ebe ọ bụla ọzọ na ịntanetị. Nchọgharị nke blọọgụ ndị ọzọ enweghị ihe ọ bụla na Sergei mere 'nyocha nke ọma' site na email.
Oge ahụ dịkwa mma - ebe ọ bụ na anyị na nsogbu ndị a metụtara njikwa na ọrụ m ugbu a.